iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #18 by Dariussssss
Ukuba ufumana iingxaki, iimpazamo okanye ukuba eminye imibuzo malunga FS2004 Simulator, ziposele apha. Kwakhona zisixelela ntoni lebug kunye izisombululo zeengxaki ezahlukeneyo iimpazamo FS2004.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #213 by mmickey
Molo Ndathenga package B777 for FSX bam Rikooo ndingasweli nako ukuyiphatha \_ FMS ukusetyenziswa okanye nayiphi panels ukufumana yababini. Ndicela uncedo.
Mna olutsha kakhulu FSX. Enkosi.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #214 by Dariussssss
Ndisazibuza nokuba bendithe bazame ukukunceda. ...
Okokuqala, wrong indawo ukubuza, oku kunceda FS2004, kungekhona FSX.
Okwesibini, indlela wabhala lo, andinako nzima ukuqonda oko.
Okwesithathu, iinkcukacha ezingakumbi, nto leyo moya kanye na umxokozelo.
Okwesine, ngokwenene musa ukucinga ukuba uthenge loo moya apha. Njengoko kangangoko ndiyazi, yonke into apha freeware.
Ixesha ukwenza page: 0.211 imizuzwana